Kulankii 19-Aad Ee Kalfadhiga Afaraad Oo Hadda U Socoda Xildhibaannada Golaha Shacabka – Kalfadhi
Waxaa goor dhawayd furmay kulanka 19-aad ee Golaha Shacabka BJFS. Kulanka Waxaa shir guddoominaya guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan, iyadoona uu goobjoog ka yahay guddoomiye ku xigeenka labaad ee Mahad Cabdalla Cawad.
140 Xildhibaan ayaa kulanka goobjoog ah, ajendaha kulan ayaa ah saddex qodob oo kala ah: 1. Codeyn ansixin horudhac ah wax ka badalka xeer hoosaadka golaha shacabka. 2. Qeybinta mashruuc sharci ku saabsan xuquuqda liil tirka siyaasiyiinta dowladda federaalka Soomaaliya. 3. Qeybinta aqrinta labaad ee hindise sharciyeedka hay’adda naafada Qaranka Soomaaliya.
Xildhiaabannada ayaa qodob qodob loogu aqrinayaa xeerhoosaadka iyadoo qodob kastaa marka la aqriyo ciddii aragti ka qabta ay ay si kooban uga aragti dhiibanayso.
Guddoonka ayaa furitaanka kulanka uga codsaday in si hordhac ah shar cigaan loo ansixiyo ka codsaday xildhibaannada.
Qodobada qaar ayaa xildhibaanadu tilmamayaan in sidoodii loo dhaafo, oo cod gacan taag ah ayay qoddobbada qaar in sidoodii loo dhaafo ku meel marinayaan halka kuwo farsamo ahaan wax looga beddelayna ay guddiga ku raacayaan hab siiqaynta ay ku sameeyeen.
Wixii kusoo kordha kala soco kala soco www.kalfadhi.com